Real Madrid oo war ka soo Saartay dhaawaca Karim Benzema? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Real Madrid oo war ka soo Saartay dhaawaca Karim Benzema?
Published on October 12, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(12-10-2017) Kooxda kubada Cagta Real Madrid ayaa shaacisay in Weeraryaahnkeeda Karim Benzema.uu sirasmi ah ugu soo laabtay Garoomada kadib markii uu ka soo kabsaday dhaawicii uu beryahaan kaga Naadigiisa.
Real Madrid ayaa soo dhaweyn doonya Xiddiga dalka France ee Karim Benzema.kulanka Horyaalka Spain ee ay lacayaarayaan Naadiga Getafe sidaa waxaa lagu yiri war Saxaafadeed lagu daabacay barta Twitter-ka Real Madrid Warbaahintuna soo xigatay.
Naadiga Real Madrid ayaa sidoo kale sheegtay in qaar ka mid ah Cayaartoyda kooxdaas ay weli qabaan dhaawacyo kuna soo laaban Garoomada iyada oo ay ka mid yihiin Keylor Navas, Dani Carvajal, Gareth Bale iyo Mateo Kovacic,kuwaas oo ka maqnaan doona kulanka Sabtiga ay Cayaari doonaan.